Imbwa inoda jasi munguva yechando
Nguva yechando iri kuuya nekukurumidza, Patinopfeka mapaki nemapfekero ekunze emwaka, isuwo tinoshamisika - imbwa inoda majasi munguva yechando, futi? Semitemo yakajairika, imbwa hombe dzine gobvu, gobvu rakakora dzinodzivirirwa kubva kuchando. Mhando dzakadai seAlaskan Malamutes, Newfoundlands, uye maSiberia Huskies, ane ...
Sei imbwa dzichidya huswa
Nei imbwa dzichidya huswa？ Paunenge uchifamba nembwa yako, dzimwe nguva uchawana imbwa yako ichidya huswa. Kunyangwe Iwe uchipa imbwa yako chikafu chinovaka muviri chizere nezvose zvavanoda kuti vakure uye b ...
Maitiro Ekutsemura Kitsi Yako Misumari
Maitiro Ekutsemura Kitsi Yako Misumari - Kurapa kwembambo chikamu chakakosha chekuchengetwa kwekati kwako nguva dzose. Katsi inoda nzara dzayo kuti dzichengete kutsemuka kana kutyoka. Izvo zvine zvibereko kudzora kubva kune akapinza mapoinzi ekati yako n ...